Umsesane Ieperile zokudanisa phakathi kwamaza agugumayo elwandle, sisiphumo sokuphefumlelwa esivela elwandle kunye neeperile kwaye iyindandatho yemodeli ye-3D. Le ndandatho yenzelwe ngokudibanisa igolide kunye neeperile ezimibalabala ezinesakhiwo esikhethekileyo sokuphumeza intshukumo yeeperile phakathi kwamaza agugumayo olwandle. Ubungakanani bombhobho bukhethwe ngobukhulu obuhle obenza ukuba uyilo lube namandla ngokwaneleyo ukwenza umfuziselo usebenze.
Iklabhu Yezolonwabo Buyela kubomi obulula, ilanga ngokukhanya kwefestile kunye nesitrato esinqamlezileyo. Ukuze ubonakalise ngcono incasa yendalo kwisithuba esipheleleyo, sebenzisa ngokupheleleyo uyilo lwelog, elula kunye nesitayile, intuthuzelo yobuntu, uxinzelelo lomoya kwindawo yendawo. Ithoni yomtsalane waseMpuma, kunye nomoya okhethekileyo wendawo. Le yenye intetho yangaphakathi, yeyendalo, inyulu, iyahluka.
Ukupakisha Iti Eyomileyo
Ukupakisha Iti Eyomileyo Uyilo sisiqulatho sesilinda esinemibala ebonakalayo. Ukusetyenziswa kobuchule kunye nokukhanya kwemibala kunye neemilo kudala uyilo oluhambelanayo olubonisa ukufakwa kwe-herbal infusions ye-SARISTI. Yintoni eyahlula uyilo lwethu kukukwazi kwethu ukunika itwist yanamhlanje ukomisa ukuphakheja iti. Izilwanyana ezisetyenziselwa ukupakisha zimele iimvakalelo kunye neemeko abantu abahlangabezana nazo rhoqo. Umzekelo, iintaka zeFlamingo zimele uthando, ibhere lePanda limela ukuphumla.
Ukupakishwa Kweoyile Yomnquma
Ukupakishwa Kweoyile Yomnquma Njengoko amaGrike amandulo ayethanda ukupeyinta kunye nokuyila ioyile nganye ye-amphora (ikhonteyina) ngokwahlukeneyo, bagqiba kwelokuba benze njalo namhlanje! Bavuselele kwaye basebenzisa obu bugcisa bamandulo kunye nesiko, kwimveliso yanamhlanje apho nganye nganye kwiibhotile ezingama-2000 ezivelisiweyo zineepateni ezahlukeneyo. Ibhotile nganye yenzelwe ngokukodwa. Yinto eyodwa yohlobo oluthile loyilo, oluphefumlelweyo kwiipateni zamandulo zamaGrike zinomnxeba wangoku obhiyozela ilifa lemveli leoyile yeoyile. Akuyona isangqa esikhohlakeleyo; ngumgca othe ngqo ophuhlisayo. Wonke umgca wemveliso wenza uyilo olwahlukileyo lwama-2000.
Ukubeka Uphawu I-1869 iPrincipe Real yindawo yokulala nesidlo sakusasa kwindawo ekulona lifashoni eLisbon-ePrincipe Real. UMadonna usandula ukuthenga indlu kule ndawo. Le B & B ibekwe kwibhotwe elidala le-1869, igcina ikhubalo elidala elidityaniswe nezinto zangaphakathi zangoku, ilinika ukubukeka okutofotofo kunye nokuziva. Olu phawu lwalufuneka ukuba lubandakanye la maxabiso kwi-logo kunye nokusetyenziswa kwezimpawu ukubonisa ifilosofi yale ndawo yokuhlala ikhethekileyo. Inika iziphumo kwilogo edibanisa ifonti yodidi, ikhumbuza iinombolo ezindala zomnyango, kunye ne-typography yanamhlanje kunye neenkcukacha zesithonjana sebhedi e-L yeNene.
Alignment to Air Imiboniso Bhanyabhanya Tuesday 5 July
Marais Ukupakisha Izipho Kwiikhekhe Monday 4 July
Cliff House Ukuhlala Impelaveki Sunday 3 July
Umsesane Ikati Ibhedi Iklabhu Yezolonwabo Ukupakisha Iti Eyomileyo Ukupakishwa Kweoyile Yomnquma Ukubeka Uphawu